Tontolo Arabo: Inona No Hiova Amin’ny Fahalanian’i Obama Fanindroany? · Global Voices teny Malagasy
Tontolo Arabo: Inona No Hiova Amin'ny Fahalanian'i Obama Fanindroany?
Voadika ny 23 Novambra 2012 14:20 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, فارسی, Español, Ελληνικά, বাংলা, English
Lany ho filoham-pirenena amerikana fanindroany i Barack Obama nefa ahoana ny fandraisan’ireo mpampiasa aterineto manerana ny Tontolo Arabo izany? Indro misy pitiny kely tamin’ireo bitsika tao amin’ny Twitter taorian’ny fahalaniany indray. Mizarazara ireo fihetseham-po ka raha tsy faly noho ny politika ivelan’i Etazonia any amin’ny faritra ny ankabeazany, ny hafa kosa dia faly noho ny fandresen’i Obama.
Mamoaka ireo paikadin’ny firaisana tsikombakomba hiseho masoandro I Saudi Essam Al Zamil. Hoy izy [ar]:
@essamz: Tian’Israely kokoa raha i [Mitt] Romney no nandresy. Nefa resy izy. Mahagaga!!! Tsy nilaza va izy ireo hoe Israely sy ny mponina ao Ziona no mitantana izao tontolo izao ka nanisakisaka antsika tahaka ny fanisaka ny vatom-panorona?
Lasa saina i Gigi Ibrahim, Ejiptiana, hoe mba tahaka ny ahoana re ny fihetsik’i Obama [mandoka ny vadiny sy ireo zanany vavy] rehefa nandresy raha filoham-pirenena Arabo izy:
@Gsquare86: Obama miteny ampahibemaso ny fitiavany an’i Michelle sy miresaka amin’ny zanany vavy, haha, eritrereto anie raha i Morsi na filoha Ejiptiana no manao izany e.
Nizara hevitra mitovitovy amin’izay i Kuwaiti Al Saqar:
@alsaqar_87: Namihina ny vadiny i Obama taorian'ny nandreseny tamin’ny fifidianana raha ireo namantsika kosa maka vady faharoa rehefa mandresy amin’ny fifidianana izy ireo !! haha
Manome voninahitra ny lahatenim-pandresen’i Obama ilay mpanao politika Koetiana Dr Aseel Al Awadhi:
@AseelAlawadhi: Tokony ho fitaratra ho an’ireo filoha arabo rehetra ny lahateny nataon’i Obama taorian’ny fandreseny. Manafatra ny zava-drehetra avy amin'izy ireo isika koa maninona koa moa isika raha mba mampiditra ny hakingan'izy ireo ara-politika?
Ary eso malefaka kosa no nataon’ilay Syriana Bint Al Rifai nanomezany voninahitra ny fitantanan’i Obama:
@BintAlRifai: Fitantanan’i Obama… Mahafolaka tanteraka ny fampiasana ny molotra
Niezaka ny hahatonga saina ny olona ilay Ejiptiana Raafat Roheim tamin’ny filazana fa tsy miova miaraka amin’ny fiovanà filoha ny politika ivelan’i Etazonia:
@Raafatology: Ny olona tsy misy saina dia mihevitra fa niova ny politika ivelan’i Etazonia raha nandresy teo i [Mitt] Romney. Na dia i Kim Kardashian aza no lasa filoham-pirenena dia tsy hiova izany ny politikan-dry zareo.
Manamarika ilay Ejiptiana mpanao gazety, Ayman Mohyeldin hoe:
@AymanM: fampielezan-kevitra mandritry ny 2 taona, vola an-davitr’isa no lany, nandresy i Obama, fehezin’ny demokraty ny antenimeran-doholona, mitantana ny antenimieram-pirenena ny repoblikana nefa hampiova zavatra ve izany?
Raha mianihany mikasika ny fifandraisan’I Obama amin’ny Islam ilay Jordaniana Naseem Tarawnah:
@tarawnah: Raha misaotra an’i Allah ny filoha Obama mandritry ny lahatenim-pandreseny, dia mihorohoro ny olon-drehetra. NY OLON-DREHETRA.
Mandritra izany fotoana izany, ilay Jordaniana Fadi Zaghmout dia manohana an’i Obama:
@ArabObserver: Hifidy an’i Obama kosa aho amin’ny #USElection #ivoted noho ny maha-mponin’izao tontolo izao ahy.
@ArabObserver: Misaotra indrindra ry Amerikana namako nifidy ny faasalaman-tsaina omaly. Fandresena ho antsika rehetra ity. Arahabaina!
Ary mirary soa ho an’i Amerika ilay Ejiptiana Nadia El-Awady:
@NadiaE:Mahafinaritra ny mandre ny fandresen’i #Obama eo am-pifohazana. Mirary soa ry Amerika a.
Israely 7 andro izay